Midawga Africa oo madaxda DKFS ku ammaanay ka go?naashaha soo af-jarida xilliga kumeel-gaarnimada. – Radio Daljir
Luulyo 19, 2012 6:21 b 0
Moqdisho, July, 19 ? Kuxiggeenka wakiilka Midawga Africa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Wafula Wamanyini ayaa shir-jaraa?id oo uu maantay ku qabtay Moqdisho waxaa uu si cad madaxda sare ee DFKS ugu ammaanay dadaallada ay ku soo af-jarayaan marxalada kumeel-gaarnimada ee dalku hadda ku jiro.
Mr Wafula Wamunyini ayaa qeexay inaysan wax-shaki ah ku jirin, 20-ka August Soomaaliya inay helayso isbadal-dhab ah oo dhinac-walbo leh, waxaana isagoo sii wata hadalkiisa uu rajo-wanaagsan ka muujiyay in odoyaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ku sugan Moqdisho maalinta birriya ay soo dhammaystirayaan xubnaha ka maqan tirada ergooyinka ansixinaya Dastuurka Soomaaliya.
Kuxiggeenka ergiga Midawga Africa u qaabilsan Soomaaliya Wafula ayaa mar-kale ka hadlay halka uu Midaw Africa ka taagan-yahay waxa uu ugu yeeray qaswadayaasha Soomaaliya, waxaa uu u jeediyay digniin culus, waxaana uu sheegay inay soo bandhigi-doonaan magacyada dadka qasaya arrimaha Soomaaliya, haddii aysan joojin dhaleecaynta iyo rabshadaha siyaasadeed ee dalka ay ka wadaan.
Hanjabadaan kasoo yeeraysay Ururka Midawga Africa ayaa baqdin-badan galisay siyaasiyiin lugta ku walaaqayay siyaasadda Soomaaliya, waxaana fariintaan ay u muuqataa sida aduunku ula xisaabtamayo shaqsigii baal-mara jadwalka loogu talagalay Soomaaliya in lagu dajiyo.